विद्यार्थी अनियमितता : समस्या कसको ? को जिम्मेवार ? – DeviRam Acharya
By Deviram Acharya	 On ७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०२:४७
– यो त शिक्षा मन्त्रालयले जान्नु पर्यो नि !
– अभिभावकले नियमित पठाउनु पर्यो नि !
– विद्यार्थी पनि त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि !
– मन्त्रालयदेखि अभिभावकसम्म सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
– हैट ! यस्तो पनि हुन्छ, शिक्षकले त आएका विद्यार्थी पढाउने हो । कक्षामा पढाउन छोडेर के घरघर विद्यार्थी लिन जाने त ? यस्तो त हुँदैन । विद्यार्थी विद्यालय नआएको त अभिभावकले जिम्मा लिनुपर्छ । आफ्ना छोराछोरी नियमित विद्यालय पठाउने, उनीहरूका लागि किताब, कापी, पेन्सिल भए नभएको ख्याल गर्ने, गृहकार्य गराउने काम त अभिभावकको पो हो । छोराछोरी स्कुल पठाएर मात्र हुन्छ र ? कुरा त यो पो हो ।
– विद्यालय कति टाढा पर्छ ?
– तपाईँ किन स्कुल जानु भएन त ?
– अब जान मिल्दैन ?
– एक पिरीयड त छुट्छ नि गए हुदैँन र ?
यो अवस्थामा हाम्रो भूमिका उसका लागि स्कुलको प्रवेश बन्द गर्ने कि संभव भएसम्म समयमै पठाइदिनुस् नभए के कारणले ढिला भएको हो कारणको जानकारी दिएर विद्यालय पठाइदिनुस, भन्ने हो ? हाम्रो उद्देश्य सिकाइ हो भने सातौँ घण्टीमै किन नहोस कोही विद्यालय आउँछ भने उसलाई सहज रुपमा विद्यालय प्रवेश दिउँ, कक्षामा बसाउँ र केही पढाउँ वा केही सिकाउ । होइन हाम्रो उद्देश्य त समयको पालना गराउने, अनुशासन सिकाउने हो भने पाँचै मिनेट ढिला हुँदा विद्यालयको प्रवेश बन्द गरिदिउँ । अनि भन्दै गरौँ विद्यार्थी नियमित आउँदैनन् त्यसैले उनीहरुको कमजोर सिकाइको जिम्मेवार उनीहरू नै छन् ।
मलाई थाहा छ, हामी धेरैले यो विचार स्वीकार गर्ने छैनौँ, यसलाई वहियात मान्ने छौँ र बकम्फुसे गफ भन्ने छौँ । मेरो प्रश्न के मात्र हो भने के सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी नियमितताका लागि यस्ता तत्वहरू जिम्मेवार छैनन र ?
हामी सिद्धान्तका रटान लगाउँदै र विद्यार्थीलाई नियमित आउँदैनन् भनेर कहिलेसम्म भनिरहने हो ? अभिभावकलाई सकेसम्म समयमा पठाउन आग्रह गर्ने हो तर खास कारणले ढिला भयो भने ढिला भएको कारण अभिभावकले जानकारी गराउने र विद्यार्थी विद्यालय आउने वातावरण तयार हुन सक्छ कि भन्ने पनि हो । अभिभावकको चेतनास्तरलाई कमजोर देख्ने हामी विद्धानहरूले उनीहरूलाई नै विद्यार्थी विद्यालय नपठाएको दोष लगाउदैँ छौँ । के हाम्रो भूमिका दोष लगाउने मात्र हो र ?
www.edukhabar.com मा प्रकाशित । श्रृङ्खला २ का लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् । deviramac@outlook.com
विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य